Marketing amin'ny kaonty Marketo: inona no tokony ho fantatra | Martech Zone
Marketo dia namoaka ny azy Marketing mifototra amin'ny kaonty (ABM) Module ho ampahany amin'ny ezaka mitombo hanohanana tsara kokoa ny fifandraisana amin'ny orinasa. Na dia fanovana tany am-boalohany aza ilay fitaovana ary mampiseho fampanantenan-tena betsaka, misy fomba sasany hametrahana ny ABM hanova orinasa manomboka mampiasa ny sehatra. Marketo dia mamaritra singa telo miavaka amin'ny vahaolana ABM:
Ny fahaizana mikendry sy mitantana kaonty sy lisitry ny kaonty.
Ny fahaizana mampiditra kaonty kendrena amin'ny fantsona rehetra.
Ny fahaizana mandrefy ny fiatraikany amin'ny kaonty kendrena.
Marketo ny manome whitepaper ao amin'ny ABM ny tombony azo avy amin'ny ABM hanatsarana ny ROI marketing, handoa vola azo, hiteraka fiovam-po bebe kokoa, hiteraka fitarihana mahay ary hampifanaraka ny varotra sy ny varotra.
84% amin'ireo mpivarotra no milaza fa ny stratejia ABM dia mihoatra ny fampiasam-bola amin'ny marketing hafa araky ny ITSMA
97% ny mpivarotra no nahatratra ROI ambony kokoa noho ny ABM noho ny fandraisana andraikitra marekting hafa araky ny Alterra Group
92% amin'ireo mpivarotra B2B manerantany no mihevitra ny ABM tena lehibe na tena zava-dehibe amin'ny ezak'izy ireo amin'ny varotra ankapobeny araka ny Sirius Decides
208% ny vola miditra bebe kokoa azo avy amin'ny marketing amin'ny orinasa izay nampifanaraka ny ekipa mpivarotra sy ny varotra araka ny MarketingProfs
Fanapahan-kevitra momba ny raharaham-barotra
Rehefa nandroso ny haitao ara-barotra, miaraka aminy ny fahaiza-manao sy fanavaozana ny teknolojia marketing mpisava lalana, dia nanjary sarotra ny rafitra namboarin'ny olona sy ampihariny. Ny firaketana an-tsoratra firaketana / fifandraisan-davitra dia misy saha 100 na maro, raha ny antonony fanatanterahana ankehitriny kosa dia mety hahatafiditra onjam-piasa 300-500 mifampitohy.
Marketo's ABM dia fitaovana iray hanamafisana ny kaonty stratejika mikendry ny filan'ny orinasa rehetra. Ny endrik'i ABM dia dingana iray mandroso ho an'ny fitaovana ara-barotra izay nahazatra tamin'ny fomba nentim-paharazana toerana tsara ho an'ny vondrona sy ny kendrena ao anatin'ilay fitaovana saingy sahirana matetika mizara izany vaovao izany amin'ny fitaovana hafa.
Ny fandraisana fanapahan-kevitra stratejika afovoany dia hiantoka fa afaka mitazona ny fampifanarahana anatiny ny orinasa ary afaka manamboatra haingana ny orinasa ny orinasa.
Fanatsarana ny fifandraisana
The fifandirana eo amin'ny Sales sy Marketing dia efa antitra toy ny taloha. Ny Marketing Automation dia nahatonga ny fampanantenan'ity vahaolana ity amin'ny alàlan'ny fanolorana ny Lehiben'ny vola miditra - Ny nofinofy hampidirina sy ekipa Sales sy Marketing mifanaraka miteny fiteny tokana ary miasa mankany amin'ny tanjona tokana.
Mampalahelo fa sarotra ity fampanantenana ity eo amin'ny sehatry ny haitao marketing. Ireo orinasa ireo dia nahatakatra ny filàna fampifanarahana ary nanamboatra fitaovana miavaka mihitsy aza ho an'izay tanjona izay, saingy nanandrana nanintona ny varotra hifanaraka amin'ny varotra, hitan'izy ireo nivadika ilay fantsona.
Ny fitenin'ny ABM dia ny fitenin'ny Sales, ampita mazava tsara amin'ny Marketing.
Ity fiovan'ny fomba fijery ity dia manome toky fa hanome aingam-panahy ny fiaraha-miasa bebe kokoa mankamin'ny tanjona iraisana sy eken'ny rehetra. Marketo's ABM dia mikendry ny hanome dashboard nizara, ho an'ny fandrefesana, ny tanjona iraisana.
Fahatakarana ny fizotran'ny Meta-Sales
Ny tsingerin'ny fividianana B2B dia tsingerina sarotra iray izay matetika misy mpandray anjara marobe manana ambaratonga lehibe manan-danja amin'ny orinasa. Ny halavan'ny fividianana dia mety ho lava, ary ny fihazakazahana dia tsy mifanaraka mandrakizay. Na eo aza izany, ny maodely mahazatra an'ny Sales and Marketing mba hifandraisany amin'ny orinasa kendrena dia miankina amin'ny tsirairay. Indraindray mety mifototra amin'ny olona marobe izy io, saingy mahalana no mahita olona afaka manara-maso ny fifandraisana rehetra amin'ny fanantenana mety hitranga.
Raha efa nampiasa Salesforce ianao dia mety ho fantatrao amin'ny teny toa Mpanapahan-kevitra, Influencer, ary Tompon-daka - Ireo olona rehetra ireo dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fanampiana ny prospect hivadika ho mpanjifa, saingy samy manana ny andraikiny izy ireo ary samy hafa ny haavon'ny lanjany.
Ankoatr'izay, tsy ireo olona rehetra ireo no fantatra ao amin'ny rafitranao, ary raha mandany ny fotoananao rehetra amin'ny fitaomana ny mpanapa-kevitra amin'ny orinasa manantena ianao dia ho fantatrao haingana fa kely dia kely ny fotoana malalaka azony resena lahatra.
Ny fomba ABM dia mikendry ny hanitatra ny resaka mihoatra ny toerana ifandraisana voalohany, ary na dia mihoatra ny fifandraisana amin'ny olona fantatrao fotsiny aza. Izy io dia mikendry ny hamorona fiteny fanamiana ho an'ny kaonty stratejika ary hifandraisana amin'ireo olona rehetra izay azo fantarina ho anisan'ireo kaonty ireo.
Ankoatr'izay, ny fomba ABM dia hanitatra ny faritry ny fifantohan'i Sale, mba hahafahan'izy ireo mampahafantatra momba ny hetsika lehibe mifandraika amin'izany tsy dia misy dikany ny fifandraisana ao anatin'ny kaontim-panadihadiana iray, manome azy ireo fahitana ny lafiny mainty miafina tamin'ny fizotran'ny fividianana taloha, miaraka amin'ireo fomba fijery azo ampiharina mba hanampiana azy io.
Fampahafantarana: Sary natolotr'i Marketo.
Tags: abmabm roipaikady abmmarketing miorina amin'ny kaontyb2btsingerin'ny fividianana b2bvarotra b2bg8technilogicalmarketomarketo abm
Maninona ny Infografika no ivon'ny tetikady SEO